Home News Kooxda Qiyaano Qaran oo Caado Iyo Dhaqan Ka Dhigtay Isticmaalka Awooda Ciidanka...
Kooxda Qiyaano Qaran oo Caado Iyo Dhaqan Ka Dhigtay Isticmaalka Awooda Ciidanka Qaranka
Ciidamada Xooga dalka waxa yihin ciidamada qaranka Soomaliyeed wana awooda Dowladnimo sido kale qeybaha kale ee ciidamada balse waxa tan iyo doorashidii 8 Febraayo ee sanadki hore dhashay ama bilaabatay isticmalka Ciidanka qalabka Side ee sida garka ah lo isticmalo.
Kooxda Qiyaano Qaran waxa ay caado ka dhigteen isticmalka awooda ciidanka qalbka sida iyado ay ku fushunayan danohooda gaarka ah iyado ku dulmiyan cidi ay doonan oo ay u arkan in uu danahooda ka so horjeedo.
Ciidanka Qaranka waxa si qaldan logu weeraray hoyga muqdisho uu ka dagan yahay Siyaasiga Cabdi Raxman Cabdi Shakuur iyado awooda Ciidanka Qalabka sida lagu dilay ila lix ka mid ah ilaalada Siyaasiga sido kalena waxa lagu dhawaacay siyaasiga iyado qalqal la galiyay dadka ku dhaqan magaalada halis badana uu galay siyasiaga in goobtasi lagu dilay.
Awooda ciidanka waxa loo isticmaalay duqi hore ee muqdisho iyado subixi la baahinayay xilka qaadistiisa laso dhoobay xarunta dowlada hoose ciidamo iyado lagu so wabariistay cidankasi oo xarunta isku gadaamay si lo qalqal galiyo maamulki Thaapit Cabdi ee xiligasi Mamulayay Xarunta Dowlada Hoose ee Xamar.
Wxa sido kale follxumo aheyd oo awooda ciidanka qarankanao isticmaalay Weerarki senotar Cabdi Qeybdiid iyado hoygiisa barqo cad loo dhacay si an wangsaneyna lola dhaqmay ehelkisa isago weliba ku maqna kulan xiligasi aqalka sare ka socday.
Xalay aya waxa mar qura laga war helay in Ciidanka Qaranka lo isticmaalay Xaruntii Golaha Shacabka ee Xildhibanada iyado Ciidamo Cusub halkaasi la geeyay si walbo cidamadasi qiil ugu yeelan Lamaha amniga hadana waxa cad oo muqata sababta xiligan lo badalay ciidanka horay ilaalada ugu aha xaruntaasi,iyado inta badan warkaasi la helay marki la dawaday muuqaalka Gudoomiye Jawaari.
Hadaba Caadada ay Kooxda Qiyaano Qaran kuso kordhiyeen Hananka dowladnimo ee Soomaaliya aya waxa uu yahay mid Foolxumo ku ah Jiri tanka Dowladnimo iyo so nooleynta dhaqamadi kacaanka.